​सडक दुर्घटनमा १८ को मृत्यु
पेशावर, (एजेन्सी) । पाकिस्तानको दक्षिण पश्चिममा यात्रुबाहक बस र एउटा तेल ट्यांकर एकआपसमा जुध्दा कम्तीमा १८ जनाको मृत्यु भएका छन् भने २५ जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । कराँचीतर्फ करिब ४८ जना यात्रु बोकेर गइरहेको बस कोहाट शहर नजिक ट्रकसँग ठोक्किएको थियो । घाइतेमध्ये नौ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको स्थानीय प्रहरी अधिकारी एजाज खानले बताएका छन् । इन्धन बोकेको ट्रकमा भने भाग्यवस आगलागी नभएको… विस्तृत समाचार
​‘निशस्त्रीकरण’सम्बन्धमा अमेरिकी दवावको उत्तर कोरियाद्वारा आलोचना
सिंगापुर, (एएफपी) । अमेरिकाद्वारा प्रकट गरिने आणविक हतियारको निशस्त्रीकरणका सम्बन्धमा देखाएको ‘दवावजन्य’ अधैर्य व्यवहारको उत्तर कोरियाले आलोचना गरेको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले उत्तर कोरियाविरुद्ध पूर्ण आर्थिक नाकाबन्दीका लागि दवाव कायम राख्नुपर्ने भनेपछि उत्तर कोरियाको उक्त भनाइको शनिबार आलोचना गरेको हो । सिंगापुरमा जारी सुरक्षा मञ्चमा संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनमा प्योङयाङले आणविक तथा क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमलाई जारी राखेको र जहाजबाट जहाजमा तेलको आपूर्ति गरी प्रतिबन्धलाई छल्न… विस्तृत समाचार
​ह्वाइट हाउसले चीनलाई किन दिए चेतावनी
वासिंगटन, (एएफपी) । अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइट हाउसका उच्च आर्थिक सल्लाहाकारले चीनले नयाँ व्यापार करसम्बन्धी दिएको चुनौतिबारे जवाफ दिँदै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई कमजोर मुल्यांकन नगर्न चेतावनी दिएका छन् । आर्थिक सल्लाहाकार ल्यारी कुड्लोले ट्रम्पले उचित प्रतिक्रिया दिने समेत बताएका छन् । अमेरिकी ब्लुमवर्ग टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा आर्थिक सल्लाहाकार ल्यारी कुड्लोले भने, ‘चिनियाँहरूले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई अघिबढ्न सक्नुहुन्नहोला भनेर कम नआँक्नु राम्रो होला ।’ कुड्लोको यो प्रतिक्रिया… विस्तृत समाचार
हरारे, (एजेन्सी)। जिम्बाबेको प्रमुख विपक्षी गठबन्धन मुभमेन्ट फर डेमोक्रेटिक चेन्ज (एमडीसी)ले वर्तमान राष्ट्रपति इमर्सन मान्गाग्वा विजयी भएको परिणाम आफ्नो गठबन्धनले अस्वीकार गरेको जनाएको छ । सो गठबन्धनका प्रमुख नेल्सन चामिसाले यस नतिजालाई फर्जी भनेका छन्, ‘यो निर्वाचन धाँधलीपूर्ण रुपमा गराइएको छ, हामी यस्तो नतिजा अस्वीकार गर्दछौँ ।’ तर, जिम्बाबेको निर्वाचन आयोगले निर्वाचन निष्पक्ष रुपमा भएको र कुनै धाँधली नभएको स्पष्ट पारेको छ । चुनाव सम्पन्न… विस्तृत समाचार
​राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि मान्गाग्वाले भने, ‘समृद्ध जिम्बाबे बनाउन एक हौँ’
हरारे, (एजेन्सी) । जिम्बाबेको राष्ट्रपतिमा सत्तारुढ जानु–पिएफ पार्टीबाट उम्मेदवार वर्तमान राष्ट्रपति इमर्सन मान्गाग्वा विजयी भएका छन् । पूर्वराष्ट्रपति रोबर्ट मुगाबेको लामो शासनकालपछि भएको पहिलो निर्वाचनमा इमर्सनको दलले संसदमा समेत बहुमत प्राप्त गरेको छ । मान्गाग्वाले ५०.८ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका छन् भने उनका विपक्षी नेल्सन चामिसाले ४४.३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । तर, विपक्षीहरुले मतदानमा धाँधली भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर… विस्तृत समाचार
​‘गुगलले चीनका लागि सर्च इन्जिन विकास गर्दै’ ! के अब चीनमा गुगल चल्छ ?
बेइजिङ, (एएफपी) । गुगलले चीनको कठोर सेन्सरसीप नियमलाई सम्बोधन गर्नेगरी सर्च इन्जिन विकास गरिरहेको कम्पनीमा कार्यरत एकजना कर्मचारीले बताएका छन् । मानव अधिकारवादीहरुले यस कार्यको विरोध गरेका छन् । सेन्सरसीप र ह्याकिङ गरिएको भन्दै आठ वर्षअघि चीनबाट गुगल बाहिरिएको थियो । तर, नाम नबताउने शर्तमा ती कर्मचारीले ‘ड्रागनफ्लाई’ गोप्य नाम राखिएको परियोजनामा अहिले काम भइरहेको बताएका छन् । मानिसले खोजेका कतिपय विषयलाई फिल्टर (छान्ने) गर्नेगरी… विस्तृत समाचार
जिम्बाबेमा मान्गाग्वालाई विजयी घोषणा गरिएसँगै विपक्षीको विरोध प्रदर्शन
हरारे, (एपी) । जिम्बाबेको राजधानी हरारेमा बुधबार क्रुद्ध प्रदर्शनकारीले ढुंगामुढा र सवारी साधनमा आगजनी गर्न थालेपछि सेना र प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्न गोलीका साथै पानीका फोहरा र अश्रुु ग्यास प्रहार गरेको छ । सेना र प्रहरीको हस्तक्षेपबाट कम्तीमा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । सत्तारुढ दल जानु–पिएफका संस्थापक नेता एवं पूर्वराष्ट्रपति रोबर्ट मुगाबेको लामो शासनकाल समाप्त भएसँगै पहिलोपटक सम्पन्न चुनावबाट मुलुक नयाँ मार्गमा प्रवेश गर्ने… विस्तृत समाचार
​सामसुङ र हुन्डाइलगायत १० कम्पनीको बजार उच्च गिरावट
सिओल, (एजेन्सी) । घट्दो सेयर मूल्यका कारण दक्षिण कोरियाका प्रमुख १० ठूला कम्पनीको बजार मूल्यमा यसवर्ष ठूलो गिरावट आएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । कर्पोरेट विवरणको विश्लेषण गर्ने चाबुल डट कमका अनुसार, सूचीकृत प्रमुख १० कम्पनीको संयुक्त बजार मूल्य मंगलबारसम्म ८१४ अर्ब डलर (९१३ खर्ब वन) मा झरेको छ । यो यही वर्ष जनवरी २ तारिखको तुलनामा ६ प्रतिशतको गिरावट (५८ खर्च वन) हो । … विस्तृत समाचार
​दुर्घटना एकै परिवारका १४ जनाले ज्यान गुमाए
हनोई, (एजेन्सी) । मध्य भियतनामा सोमबार भएको एक सडक दुर्घटनामा एकै परिवारका १४ व्यक्तिले ज्यान गुमाएका छन् । विवाहको पार्टीको लागि गइरहेको एक भ्यानलाई ट्रकले ठक्कर दिँदा सो दुर्घटना भएको जनाइएको छ । भ्यानमा बेहुला समेत रहेका प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ । मध्य भियतनाको क्वाङ नाम भन्ने स्थानमा भएको यस दुर्घटनामा बेहुलासहित एकै परिवारका अरु सदस्यको मृत्यु भएको थियो । उनीहरु स्थानीय समयाअनुसार सोमबार… विस्तृत समाचार
एक–दलीय राज्यमा रुपान्तरित हुँदैछ कम्बोडिया
नोमपेन्ह, (एएफपी) । कम्बोडियाको आइतबार (आज) सम्पन्न निर्वाचनबाट हुन सेनको ३३ वर्षे प्रधानमन्त्रीत्वकाल पुनः थप हुने भएको छ । विपक्षी दलहरु निरिह र नाम मात्रका भएकाले सेनको विजय सुनिश्चित भएको हो । उनको विजयसँगै प्रकारान्तरले कम्बोडियो एक–दलीय राज्यमा रुपान्तरित हुनेछ । हुन सेन सन् १९८५ मा कम्बोडियाको सत्तामा आएका थिए । सत्तामा आएसँगै उनले नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र राजनीतिक विपक्षीहरुको दायरा साँघुरो बनाए ।… विस्तृत समाचार